ISikhululo seenqwelomoya saseZagreb sanamhlanje & esiNtofontofo W/ WiFi yasimahla
Ineendawo zangaphakathi zale mihla kunye neLuxury Apartment iye yahlaziywa ngo-Epreli ka-2021 kwaye yaxhotyiswa ngayo yonke into umntu ayidingayo ukuze uhlale kamnandi kwaye ukhululekile. Ilungele izibini, amaqela kunye neentsapho ukuya kwezine kwaye kukho ibhedi eyongezelelweyo yomntwana. Itholakala kwiikhilomitha ze-4 (iikhilomitha ezingama-2.4) ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya (i-ZAG - uFranjo Tuđman) kunye neekhilomitha ezili-16 (iikhilomitha ezili-9.9) ukusuka eZagreb, inkulu-dolophu yaseCroatia.
Sikunqwenelela ukwamkela ngokufudumeleyo kunye nokuhlala okumnandi!
Indlu eyi-40 m2 (430.5 ft2) inegumbi lokuhlambela elineshawari, ikhitshi elinefriji, i-oveni, ihob, itoaster/igrill, umatshini wokuhlamba izitya, itafile yokutyela nazo zonke izixhobo zokupheka kunye nempahla. Kwindawo encinci yokuhlamba iimpahla kukho iwasha / isomisi.
Kukho ibhedi yokumkanikazi ekhululekile (160 x 200 cm) kwigumbi lokulala, iindawo zokulala ezinezibane zobusuku kunye namampunge.
I-sectional kwindawo yegumbi lokuhlala inokusebenza njengebhedi eyongezelelweyo kwi-1 okanye i-2 abantu.
I-Apartment ineyunithi ye-A/C, ukufudumeza okuphakathi, i-wi-fi yasimahla kunye nee-TV ezimbini ze-smart ezingama-50, enye ikwigumbi lokuhlala enye kwigumbi lokulala, eneziteshi zesathelayithi kunye neNetflix. I-wardrobe ebanzi enebhokisi yediphozithi ekhuselekileyo kunye nebhokisi yoncedo lokuqala ibekwe kwindlela yokungena. Izibane ezikwiflethi zinokucuthwa, zivulwe kunye ne-remote, kunye nokutshintsha eludongeni.
Ivenkile enkulu, ikhemesti, ukhathalelo olukhawulezayo, indawo yokudlala yabantwana iphakathi kwemizuzu emi-5 umgama wokuhamba, kunye neekhefi kunye neeresityu. Isikhululo sebhasi sikufutshane nalapho iibhasi ezithe ngqo zisingisa eZagreb zisuka - Bus 290 ukuya eKvaternik Square ngeZAG kwisikhululo seenqwelomoya kunye neBus 268 ukuya eZagreb Main Central Station.